Mitsangana Hanohitra Ny Herisetra Ara-nofo Taorian’ny Fanafihana Nandritra Taombaovao ny Bangladeshita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2015 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny polski, 日本語, Español, English
Hetsika antserasera manohitra ny herisetra ara-nofo ao Bangladesh. Sary: হোক প্রতিরোধ/Hok Protirodh (Andeha Hanohitra) Nahazoan-dalana.
Nanatontosa fihetsiketsehana tao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ao Bangladesh ny olona taorian'ny fametavetana sy fampijaliana ireo vehivavy maro tao amin'ny Oniversiten'i Dhaka nandritra ny fankalazana ny Taombaovao Bengali.
Tsy vitany hoe mampalahelo ny zava-nitranga ny harivan'ny 14 Aprily, 2015 tao Dhaka fa manafintohina ihany koa. Nampiseho vondron-dehilahy 30 hatramin'ny 40 misetrasetra sy mametaveta vehivavy manodidina ny 20 teo tao amin'ny zaridainan'i Shuhrawardy Udyan akaikin'ny faritra Foiben'ny Mpianatra sy ny Mpampianatra rehefa handeha hody any an-trano avy nankalaza ny Taombaovao ny lahatsarin'ny fahitalavitra amin'ny “fantsona mikombona” iray .
Niezaka niditra an-tsehatra ireo sasany nahita maso, iray amin'izany ilay mpikatroka Liton Nandi. Tapaka ny sandriny nandritra izany ary hoy izy tamin'ny bdnews24.com:
Nianjera ny vehivavy iray raha nanomboka nisetrasetra taminy sy niezaka nanala ny ankanjony imasom-bahoaka ireo tanora jiolahimboto. Nanomboka nidaroka ahy izy ireo raha niezaka namonjy ilay vehivavy aho. Safotra koa aho ary tapaka nandritra ny fanafihana ny sandriko
Nilaza ny manampahefana tany am-boalohany fa tsy nahafantatra na inona na inona momba ny herisetra, na dia azo sary (lahatsary) aza ny zava-nitranga teo anoloan'ireo olona an-jatony ary teny an-toerana ihany koa ny polisy nandritra ny fotoana nandaminana ny vahoaka. Dimy andro tatỳ aoriana, niaiky ny fisian'ny fanafihana ihany ny polisy, saingy tsy nanome lanja izany. Nampahafantatra ihany koa izy ireo fa nitono-tena tany amin'ny polisy ny iray tamin'ireo nahavanon-doza saingy navotsotra avy eo. Nanome baiko ny inspektera jeneralin'ny polisy sy ny Filoha lefitry ny Oniversiten'i Dhaka ny Fitsarana Avo ao amin'ny firenena mba handefa tatitra mikasika izay dingana noraisina hanasaziana ny meloka.
Raha tsy nahita sy tsy nahasambotra na dia iray tamin'ireo nahavanon-doza aza ny mpitandro filaminana, nandinika lalina ny sary sy ny endrik'ireo mpanafika ny mpisera Facebook sy Twitter.
Niteraka hatezerana ny zava-nitranga, ary naneho ny fahatezerany tamin'ny fihetsiketsehana amin'ny endriny vaovao ny sasany. Notampenan'ny mpianatry ny Oniversiten'i Dhaka ao amin'ny Ivontoeran'ny Fampianarana Zavakanto Tsara ny tobin'ny polisy Shahbag ary nasehon-dry zareo ho manao fitafiam-behivavy, miravaka haban-tanana sy mitondra vatomamy fitsentsitra ny polisy ho fanoherana ny tsy fandraisan'izy ireo andraikitra manoloana ny raharaha.
Tao amin'ny haino aman-jery sosialy, niparika ny lahatsary sy ny sary ahitana ireo olona maneho fahatezerana manoloana ny tsy fihetsehan'ny manam-pahefana sy ny tsy fandraisan'andraikitr'ireo nanatri-maso. Nandefa lahatsary misy feo, izay efa nojeren'ny olona maherin'ny 150 000 ilay olo-malaza Mumtaheena Buni Toya.
Dika teny: #Boishakhi Burkha – Lamaodin'ny Hoavy – Ary mbola mahazo ireo fanehoan-kevitra ireo ny niharam-boina – “Haram Burkha”, “Hita tsara ny maso”, “Hitanao tsara ny tanana”, “kolontsaina vahiny”, “Manana endrika Hindu ny Burkha”. Sary tao amin'ny হোক প্রতিরোধ/Hok Protirodh (Andeha Hanohitra) Nahazoan-dalana.
Pejy vondrona Facebook marobe no natsangana, anisan'izany ireo antsoina hoe ‘hok protirodh‘ (Andeha Hanohitra) sy ny Stand By Her, [Mijoroa eo anilany] mangataka amin'ireo vehivavy hitsangana hanohitra ny herisetra ara-nofo.
Manome Tsiny Ny Niharam-boina
Naneho ny fahasorenany tao amin'ny lahatsary Facebook amin'ny toe-tsaina tokony hanomezana tsiny ny vehivavy iharan'ny fanafihana i Aantaki Raisa:
“Nahoana no mitafy akanjo toy izao izy? Nahoana izy ireo no tany? Raha niahy ny voninahiny izy ireo dia tsy tokony nankany amin'ny toerana tahaka izany.” Zavatra mahazatra eo amin'ireo mpanolana izany - manome tsiny ny niharam-boina. Toy izaony lojikan'izy ireo: ohatra, voaroba ny tranonao ary mibedy anao ny olona noho ny fananana zavatra lafo vidy. Tokony tehirizinao any amin'ny banky ireo zava-tsarobidy rehetra .. karatra fakàna vola na fandoavam-bola ihany no ampiasao … tokony nanakarama mpiambina any an-trano ianao. Avy eo tohizan’izy ireo hoe .. nahoana no manofa trano eto amin'ity faritra tsy milamina ity ianao? Ahoana no fihetseham-ponao taorian'ny fandrobana ny fanananao? Ataovy sary an-tsaina fotsiny hoe voaolana ny tovovavy iray, maratra ny taova saropadin'izy ireo, ahoana no ho fihetseham-pon'izy ireo raha mahare lojika tahaka izany? Raha iharan'ny herisetra eny an-dalambe ny tovovavy ary rovitra ny fitafian'izy ireo, ahoana no fihetseham-pon'izy ireo raha milaza zavatra tahaka izany ianao?
Avy amin'ny vondrona mahery fihetsika ara-pivavahana, izay nahazo vahana tao Bangladesh tao anatin'ny taona vitsy ny sasany amin'ireo lahateny fanomezan-tsiny ny niharam-boina. Nilaza i Shafi Ahmed Shah, lehiben'ny vondrona Islamika fondamentalista Hefazat-e-Islam fa nitranga ny herisetra satria tsy maotina amin'ny fitafiany ireo vehivavy. Nanome tsiny ny fampianarana miaraka ihany koa izy ary nandrisika ny fisarahan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny toeram-pampianarana na ny toeram-piasana
Nanome tsiny ny herisetra ara-nofo amin'ny hafanam-po tafahoatra ara-pivavahana sy ny rafitra anjakazakan-dehilahy kosa ny lehiben'ny Vaomieram-pirenena misahana ny Zon'Olombelona ho setrin'izany.
Namorona faneva ahitana mariky ny tanana miloko mainty ny mpianatra tamin'izy ireo nanao fihetsiketsehana manodidina ny Oniversiten'i Dhaka mba hanohitra ny zava-nitranga amin'ny “herisetra ara-nofo tao amin'ny tobim-pianarana nandritra ny fankalazana ny taombaovao Bengali. Sary avy amin'i Sk. Hasan Ali. Zon'ny mpamorona Demotix (20/4/2015)
Nilaza ny mpanoratra gazety zokiolona, Farzana Rupa fa nahazo fandrahonana ho faty avy amin'ny olona milaza ny tenany fa lefitry ny lehiben'ny fikambanana mpioko Islamika izy minitra fohy taorian'ny fandefasan'ny fahitalavitra Ekattor ny tatitrany momba ny fanafihana tamin'ny 18 Aprily. Nanadihady lahatsary maharitra adiny iray nalain'ny fahitalavitrairay ao amin'ny “fantsona mikombona” napetraky ny polisy tao amin'ny toeram-pianarana ilay fahitalavitra
Raha ireo mahery fihetsika ara-pivavahana no tena ao ambadik'ity fanafihana nomanina ity, dia tsy vao voalohany ny fetin'ny Taombaovao, izay lazaina ho mifanohitra amin'ny kolontsaina silamo no nanjary lasibatra. Tamin'ny 2001, namono olona sivy tao amin'ny renivohitra akaiky ny Oniversiten'i Dhaka ny fanapoahana baomba iray.